XOG: Qorshe Xilka looga tuurayo Guddoomiye Mursal oo ka bilowday Villa Soomaaliya | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: Qorshe Xilka looga tuurayo Guddoomiye Mursal oo ka bilowday Villa Soomaaliya
XOG: Qorshe Xilka looga tuurayo Guddoomiye Mursal oo ka bilowday Villa Soomaaliya
Wararkii ugu danbeeyay aan ka heleyno mooshinka iyo cakirnaanta siyaasadeed eek a jirta dalka ayaa waxay sheegayaan tan iyo xalay iney madaxtooyada Soomaaliya ay ka socda kulamo gaar gaar ah oo ay yeelanayaan madaxda ugu sareysa dalka.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre iyo Fahad Yaasiin agaasime ku-xigeenka Hay’adda Nabad sugida iyo Sirdoonka Qaranka oo ka carooday tallaabada xildhibaanada qaar ay qaadeen ayaa bilaabay iney raadiyaan hab wanaagsan oo ay xilka kaga tuuri karaan Guddoomiye Mursal.
Xildhibaanada qaar ee taageersan Xukuumadda Nabad iyo Nolol ayaa lagu wargeliyay iney diyaariyaan hanaan ay mooshin kaga gudbin karaan Guddoomiyaha Golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheikh C/raxmaan oo shalay aqbalay mooshin laga gudbiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Kheyre oo ka xumaaday Ficilada uu la yimid Guddoomiye Mursal ayaa doonaya inuu la marsiiyo wadadii Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Fahad Yaasiin Xaaji ayaa sameeyay xafiis u gaar ah xiriirka xildhibaanada Mooshinka ka keenay Madaxweynaha Soomaaliya, kuwaasi oo la rabo inay Heshiisyo hoose la galaan Madaxtooyada Soomaaliya si Mooshinka oo dhan loogu wareejiyo dhinaca Guddoomiyaha Baarlamaanka.
Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa Xildhibaanada uu hormuudka kaga dhigay qorshahan u balanqaaday Xilal iyo Lacago hadii ay u fududeeyaan hawshan.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada qeybta ka ahaa Mooshinka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa durba sheegay in looga been abuurtay inay qeyb ka yihiin Mooshinkaasi taasoo muujineysa in Madaxda Dalka ay durba kala dilayaan Xildhibaanada Mooshinka waday.
Loolan siyaasadeed oo aad u adag ayaa ka dhex jira madaxda ugu sareysa dalka,waxaana dadka Siyaasadda odorasa ay saadalinayaan in Xiisadan oo Masuul ku bixi doono.